ကေပေါ့ပ် ဂန္ထဝင် အဆိုတော်ကြီး ချိုယုံဖီကို နယူးယောက်မြို့တွင် ကြော်ငြာ ဆိုင်းဘုတ်ဖြင့် ဂုဏ?? - Yangon Media Group
ကေပေါ့ပ် ဂန္ထဝင် အဆိုတော်ကြီး ချိုယုံဖီကို နယူးယောက်မြို့တွင် ကြော်ငြာ ဆိုင်းဘုတ်ဖြင့် ဂုဏ??
ကေပေါ့ပ်ဂန္ထဝင်အဆိုတော်ကြီး ချိုယုံဖီ၏ ဂီတသက်တမ်း နှစ်(၅ဝ)ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ၎င်းကို ချစ်သော ပရိသတ်များက အမေရိ ကန်ပြည်ထောင်စု နယူးယောက် မြို့ Times Square အရပ်တွင် ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်ဖြင့် ဂုဏ်ပြုခဲ့ ကြကြောင်း မေ ၁ ရက် ယွန်ဟပ် သတင်းကဆိုသည်။
ချိုယုံဖီ၏ ပရိသတ်အဖွဲ့ သုံးဖွဲ့ပါ သော အသင်းသည် ငွေကြေးစုဆောင်းကာ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်ဖြင့် ဂုဏ်ပြုခဲ့ ကြသည်။ အဆိုပါကြော်ငြာတွင် ချိုယုံဖီ ဂီတာတီးနေသော ပုံနှင့်တကွ ”ချိုယုံဖီ ဂီတသည် သူ့ဘဝ၊ သူ့ဂီတသည် ငါတို့ဘဝ၊ အဆိုတော်ကြီးကို ကျွန်တော် တို့ အားပေးနေတယ်”ဟူသော စာသား များလည်း ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် ”ကေပေါ့ပ်ဂန္ထဝင် ဂီတသက်တမ်း နှစ် (၅ဝ)ပြည့်”ဟူသော စာသားများကိုလည်း အင်္ဂလိပ်စာဖြင့် ဖော် ပြကြော်ငြာခဲ့သည်။ ယခုလ အစောပိုင်းကလည်း တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့ ဂန်နမ်းသူဌေး ရပ်ကွက်ရှိ အထပ်မြင့် တိုက်တစ်လုံး၏ နံရံတွင်လည်း ဗီနိုင်းကြီးတစ်ခု ချိတ်ဆွဲကာ ချိုယုံဖီကို ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြသေးသည်။
အသက် (၆၈)နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော အဆိုတော်ကြီး ချိုယုံဖီသည် မေ ၁၂ ရက်တွင် ဆိုးလ်မြို့ရှိ ဂျမ်ဆီ အားကစားကွင်း၌ ဖျော်ဖြေရန် စီစဉ်ထားသည်။ ယခုနှစ်အတွင်း နိုင်ငံတစ်ဝန်း နယ်လှည့်ဖျော်ဖြေ ပွဲများ ကျင်းပရန်လည်း စီစဉ်ထားသည်။ ချိုယုံဖီသည် ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် ရော့ခ် ဂီတအဖွဲ့ Atkins ဖြင့် ဂီတလောကထဲ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ သို့သော် ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင် ”Come Back To Busan Port” သီချင်းဖြင့် နာမည်ကြီးလာခဲ့သူ သည်။